FALANQEYN XASAASI AH: DF Soomaaliya ma guul ayay u tahay Talaabada Mareykanka mise guuldarro Amni & Siyaasadeed? – Puntlandtimes
FALANQEYN XASAASI AH: DF Soomaaliya ma guul ayay u tahay Talaabada Mareykanka mise guuldarro Amni & Siyaasadeed?
MUQDISHO(P-TIMES)- Warka ku saabsan ciidamada dawladda Faderaalka Soomaaliya, gaar ahaana kuwa taageerada ka hela dawladda Mareykanka laga joojiyey taageeradii maaliyadeed ee Washignton ayaa si fudud ku gaaray furimaha dagaalka ee gudaha dalka.
Mareykanka ayaa taageero maaliyadeed & mid milateriba ku taageerayey dawladda Faderaalka, gaar ahaana ciidamada Sirdoonka & kuwa la dagaalanka Argagixisada, waxaana taageeradaas badankeeda ay qeyb ka ahayd fududeynta howlaha deg dega ah ee ciidamada dawladda Faderaalka.
Ra`iisulwasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre oo u muuqday in uu qiil u sameynayo talaabada musuqmaasuq iyo go`aanka dawladda Mareykanka oo ahaa mid aan si toos ah saaxada dagaalka uga war-qabin ayaa sheegay in ay tanni tahay amar ka yimid dawladdiisa.
In la joojiyo gargaarka noocyada badan lahaa ayaa uga dhigan ciidamada dawladda Faderaalka dhabar jab weyn oo soo gaaray, waxaana cabsi weyn laga qabaa in ciidamadii heli jiray Gunooyinka & Mushaarada ay ka helaan Mareykanka ay ka baxaan furimaha dagaalka.
Mr, Kheyre ma sheegin sabab ay ugu bedeli doonaan ciidamadaas, balse wuxuu sheegay in uu socdo tirro-koob rasmi ah oo ay ku ogaanayaan ciidamada dawladda, taas oo uu ku sifeeyey la dagaalanka Musuqmaasuqa.
Shaki ma saarna in kooxaha Argagixiso ay tanni u tahay fursad kale oo muhiim ah, ayna awood u yeelan karaan in ay qortaan dagaalyahano cusub, oo ay si fudud uga heli karaan magaalooyinka dalka, bacdamaa laamaha Sirdoonka qaar kamid ah laga gooyay Mushaarka.
In ay hakad galaan howlgalada ciidamada dawladda ayaa ka dhigan talaabo kale oo ay heleen kooxda Al- Shabaab, waxaana ka joogsan doono guluf dagaal oo ay abaabushay dawladda Faderaalka.
Khabiirada arrimaha ciidamada & Gaashaandhiga ayaa rumeysan in talaabada la qaaday ay u muuqanayso hiil wanaagsan oo loo galay Al- Shabaab, bacdamaa waqtiga lagu beegay uu yahay xili ay Al- Shabaab awood ahaan sii dafiicayso howlgalada ku socda awgeed.
Wasiirkii hore ee Gaashaandhiga soona noqday Taliyaha ciidamada Xooga dalka Soomaaliyeed Jen, Cabdulqaadir Cali Diini ayaa rumeysan in go’aankaas uu yahay mid aan marnaba ku imaan wadiiqo wanaagsan, wuxuuna kusifeeyey guuldarro weyn oo ku dhacday dawladda Faderaalka.
Mr, Diini ayaa leh ‘’suuragalnimada talaabada la qaaday waxay dhaxalsiinaysaa dawladda guuldarro, kaaga darane Al- Shabaab waxay u noqon doontaa fursad dahabi ah oo soo martay, si taasi uga faa’iideystaana waa in ay rajo galisaa maleeshiyadooda’’ ayuu yiri Jeneraalkan mudada xukumayey ciidamada Soomaaliya.
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa bishii October ee sanadkan sii dhamaanaya ku dhawaaqay dagaal lagu qaado Al- Shabaab, wuxuuna isku haleynayey ciidamada ugu badan ee ay taageerada siiso dawladda Mareykanka, kuwaas oo hadda laga joojiyey Saadka dagaalka, Cuntada iyo Adeegyada muhiimka ah oo dhan.
Ra`iisulwasaare Xasan Cali Kheyre ayaa markale dhabar jabiyey ciidamada Xooga dalka Soomaaliyeed, wuxuuna kusifeeyey kuwa aan joogin furimaha dagaalka, taas oo keeni karta jab kale oo siyaasad ahaan iyo milateri ahaanba ugu yimaada dawladda Faderaalka ee Soomaaliya.
Mareykanku wuxuu taageeraa ciidamada ugu badan ee kusugan gudaha Soomaaliya, gaar ahaana inta badan dawlad gobaleedyada dalka, kuwaas oo inta badan ujeedadoodu tahay la dagaalanka Argagixisada iyo sidda ugu macquulsan oo lagu qaban karro kuwa lagu tuhmayo falal Argagixiso.